Ukuncibilika koLwandle i-Antarctic kungakhuphula ukwakheka kwamafu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukufudumala kwembulunga yonke kwandiswa ngokugcinwa kokushisa okuvela ngamagesi abamba ukushisa lapho imisebe yelanga ithinta ubuso bomhlaba. Le radiation yelanga yandisa amazinga okushisa emhlabeni wonke futhi iyakhula ngezinsuku ezicacile.
Ucwaningo olwenziwe ososayensi abavela e-Institute of Marine Sciences ye-CSIC luphenye imiphumela yokuncibilika ekwakheni amafu. Ngabe zihlangene ngani?
I-Thaw yoLwandle i-Antarctic
Ngokusho kososayensi abenze lolu cwaningo, lapho iqhwa liyancibilika ngenxa yamazinga okushisa aphezulu likhipha i-nitrogen esemkhathini. Le nitrogen esemkhathini ithanda ukwakheka kwamafu. Ucwaningo luye lwathola izinhlayiya ezivela empilweni encane kakhulu ehlala eqhweni lolwandle nasemanzini ayizungezile.
Njengoba sazi, ukuncibilika kwamakhekheba eqhwa asempumalanga emhlabeni wonke kusheshiswa ukufudumala kwembulunga yonke nokuguquka kwesimo sezulu. Lokhu kuncibilika kungavumela ukuphuma kwezinto ezisiza ukwakhiwa kwamafu. Lokhu kuguquguquka akuzange kubhekwe kunoma yikuphi ukufundwa kwesimo sezulu se-polar.
Ukuqonda lolu cwaningo, kuyadingeka ukuhlaziya nokuthatha ukubheka komhlaba wonke nokuhlangene kukho konke ukuxhumana phakathi kolwandle, iqhwa, umkhathi nempilo. Le mishini yesimo sezulu iphelele impela futhi ithembele ekulinganisweni okuzimisele nokungazinzile.
Le datha ingakhuthaza, ngoba ngokwakhiwa kwamafu okungcono, inani lemisebe yelanga ewela ebusweni bomhlaba lingehla, ngaleyo ndlela kuthambise amazinga okushisa omhlaba. Ngaphezu kwalokho, ukwanda kwemvula kungaqeda isomiso ezingxenyeni eziningi zomhlaba futhi zithanda ukukhula kwezimila, zona, futhi, ezibeka ukwakheka kwamafu amasha futhi zakhe isimo sezulu esingcono nomswakama owanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ukuncibilika kolwandle i-Antarctic kungakhulisa ukwakheka kwamafu
Izingozi ezingaba khona zesiphepho Solar